Dhageyso:- Baarlamanka Oo Maanta Dalbaday Wasiir Odawaa. – SBC
Dhageyso:- Baarlamanka Oo Maanta Dalbaday Wasiir Odawaa.
Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxa uu maanta amray in Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Federalka Somaliya, uu berrito horyimaado Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), ayaa waxaa lagu wadaa in wax laga weydiiyo arrinta la xiriirta dhismaha Baarlamaanka ee Maamulka Jubbaland, xilli mooshin ka dhan ah uu Baarlamaanku gacanta ku haayo.
Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa maalintii 2-aad ka dooday mooshinkaasi, waxaana mooshinkii maanta ka dooday 41 Xildhibaano, oo siyaabooyin kala gedisan kaga hadashay aragtidooda la xiriirta Baarlamaanka Jubbaland.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulankii maanta soo xiray, ayaa sheegay in Wasiirka Arrimaha Gudaha ay ka doonayan in Arbacada, uu soo xaadiro Xarunta Golaha Shacabka.
Gudoomiyaha, ayaa bidhaamiyay in Wasiirka ay wax ka weydiin doonaan habka lagu soo dhisay Baarlamaanka Jubbaland iyo qaylo dhaanta ay ka muujinayan beelaha qaarkood, sida uu yiri.
Jawaari, ayaa ku celceliyay in Arbacada ay go’aan ka qaadan doonaan mooshinka laga keenay Baarlamaanka, haddii codka Xildhibaanada la gelin lahaa iyo haddii xal kale la raadin lahaaba.
Dhinaca Kale Magaaladda Kismaayo waxaa maanta ka dhacay Banaanbax Looga Soo Horjeeddo Mooshinka Ka socda Magaaladda Muqdisho,
Hoos ka dhageyso warbixin Uu Muqdisho ka soo diray Xasan Cowke: